लकडाउन अनुभूति : भुइँ छुन नपाएका ४५ दिन – erupse.com
एक हप्ता त हो नि, एक हप्तामा इमेल इन्टरनेटका माध्यमबाट केही जानकारी लिन्छु, केही फिल्म हेर्छु भन्ने सोचेर पुस्तक नबोकी आएकी थिए । लकडाउन लम्बिन्छ भन्ने त थियो । तर, बीचमा आवश्यक सामान खरिदका लागि केही घण्टा खुलाउला भन्ने थियो र त्यतिबेला घर जाउला भन्ने थियो । त्यस्तो भएन । फेरि लकडाउन थपिएपछि भने चिन्ता थपियो । अब के गरेर समय विताउने ! पुस्तक पनि छैन । निकै तनाब भयो । केही साथीहरुसँग कुरा भयो । पुस्तकको पिडिएफ फायल पठाउनु दिनुभयो । जसजसले पठाउनु दिनु भयो । उहाँहरुलाई धन्यवाद । यदि तपाईहरुले पुस्तक नपठाइ दिनु भएको भए । कस्तो हुन्थ्यो यी दिनहरु ? कसरी बिताउथे मैले यो समय ?
एक हप्ता त हो नि, एक हप्तामा इमेल इन्टरनेटका माध्यमबाट केही जानकारी लिन्छु, केही फिल्म हेर्छु भन्ने सोचेर पुस्तक नबोकी आएकी थिए । लकडाउन लम्बिन्छ भन्ने त थियो । तर, बीचमा आवश्यक सामान खरिदका लागि केही घण्टा खुलाउला भन्ने थियो र त्यतिबेला घर जाउला भन्ने थियो । त्यस्तो भएन । फेरि लकडाउन थपिएपछि भने चिन्ता थपियो । अब के गरेर समय विताउने !
यो बीचमा पुस्तक, फिल्म र गीत संगीत सबैभन्दा नजिकका साथी भए । कति निरस हुने थियो जीवन यी नभएको भए ? हो अनि मैले यो लकडाउनमा एउटा काम पनि सिके । म रेडियोमा काम गर्ने मान्छे । तर समाचार कक्षमा । मलाई इडिट गर्न आउदैन थियो । यो बीचमा मेरो उपलब्धी मैले इडिट गर्न सिके । साथै सेल्फ समाचार पढ्न पनि सिके । अर्थात आफै प्राविधिक, आफै समाचार वाचक । लकडाउनको उपलब्धी हो मेरो यो । जसले मलाई आगामी दिनमा काम गर्न अझ सहज र सरल हुनेछ भन्ने लाग्छ ।
यो बन्दाबन्दीमा सबैभन्दा सुखी वन्यजन्तु, पशुपंक्षी हुन् । सयौं वर्षदेखि मानिसले यिनीहरुलाई दुःख दिए, आज स्वयं मानिस कैद छन् र उनीहरु स्वतन्त्रताका गीत गाइरहेका छन् । मलाई यति बेला लेखनाथ पौडेलको पिंजडाको सुगा कविता याद आइरहेको छ । अहिले मानिस पिंजडामा छ र सुँगा हामीलाई हेरेर त्यही गीत लेखिरहेको छ ।